घरबाट गोठ जान निस्किएकी थिइन् सम्झना, दु , ष्टले इ , ज्ज , त लु , ट्यो, ज्या , न पनि लि , यो ! – Dainik Sangalo
घरबाट गोठ जान निस्किएकी थिइन् सम्झना, दु , ष्टले इ , ज्ज , त लु , ट्यो, ज्या , न पनि लि , यो !
September 25, 2020 349
गाउँलेहरू मिलेर सम्भावित ठाउँमा हेर्दा पनि सम्झना कतै भेटिइन्। त्यसपछि गोठ नपुग्दैको सिमदेवता मन्दिर गए। त्यहाँ सम्झनाको लास थियो। नि , र्व , स्त्र सम्झनाको शरीरभरि नि , ल , डा , म र टाउकोमा चो , -ट थियो। उनलाई पहिले ब , ला , -त्का , र गरी ह , -त्या गरेको प्रारम्भिक अ , नु , स , न्धा , नमा खुलेको छ।
बझाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काका अनुसार सम्झनाको श , व पो , स्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। विस्तृतमा रिपोर्ट आइसकेको छैन। प्रारम्भिक रिपोर्टमा ब , ला , -त्का , र खुलेको छ। उनको ह , -त्यामा सं , लग्न भएको आ , शं , कामा प्रहरीले सोही ठाउँका १८ वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई प , क्राउ गरेको छ। उनले प्रारम्भिक अ , नु , स , न्धा , नमा घ , ट , नामा सं , ल , ग्न , mता इन्कार गरेका छन्।
सम्झनाको कानमा पाँच आनाका सुनका मुन्द्री थिए। श , व भेटिँदा ती मुन्द्री कानमा थिएनन्। प्रहरीका अनुसार गाई-गोरु थन्क्याउन जाने बाटोमा राजेन्द्रले सम्झनालाई कहिलेकाहीँ पछ्याउँदा रहेछन्। राजेन्द्र र सम्झनाको घर दस मिनेट टाढा हो।बेला-बेलामा राजेन्द्रले सम्झनासँग कानका मुन्द्री मागिरहेको कुरा सम्झनाले हजुरबुवा गोरखलाई भन्ने गरेकी थिइन्।
एक साताअघि सम्झनाले हजुरबुवासँग राजेन्द्रले पछ्याउने गरेको भन्दै त्यो घ , टनाले आफू भ , य , भी , त भइरहेको सं , केत दिएकी थिइन्। तर, परिवारले सामान्य ठान्दा अप्रिय घटना हुन पुग्यो।
शं , काको एकै व्यक्ति उनै राजेन्द्र छन्। खड्काका अनुसार त्यसदिन राजेन्द्र सम्झनालाई पछ्याउँदै गएको हुनसक्ने शं , का गरिएको छ। र, उनले जंगल पुगेपछि सम्झनालाई मन्दिर पुर्‍याएर ब , ला , -त्का , रपछि ह , -त्या गरी मुन्द्री लगेको आ , शंका छ।
तर, राजेन्द्रलाई पक्रँदा मुन्द्री फेला परेनन्। घटनामा राजेन्द्रबाहेक अन्य व्यक्ति थिएनन् भन्ने प्रहरीको बुझाइ छ। सम्झना घरकी जेठी छोरी थिइन्। हजुरबुवा गोरख, हजुरआमा हाँसुदेवी कामीसाथ उनी बस्थिन्। उनका बाबुआमा घरमा छैनन्। हजुरबुवा हजुरआमासाथ बसिरहेकी उनी कक्षा ६ मा पढ्थिन्।
उनका माइली, साइली बहिनी र फूपू लक्ष्मी कामी घरमा छन्। बुवा बिजुली र आमा धउली कामी रोजगारीका लागि भारत कर्नाटकमा छन्। उनीहरूसाथ एक छोरा र दुई छोरी उतै छन्। विपन्न परिवार भएकाले बुवाआमा नै रोजगारीमा गएको सम्झनाका कान्छा काका ईश्वरले बताए।
‘घरपरिवार पाल्नका लागि दाजू-भाउजू भारत छन्, मैले घ , ट , ना सुनाएपछि फर्किंदैछन्,’ ईश्वरले भने, ‘ राजेन्द्रले कहिलेकाहीँ पछ्याउँदा रहेछन्, मुन्द्री माग्दा रहेछन्। त्यसदिन त ब m ला , -त्का , र गरी ह , -त्या नै गरेछन्।’ उनीहरूको जग्गा-जमिन खासै छैन। पेशा केही पनि छैन।
बिहान गएर खोलेफाडो गर्थिन्, पानी खुवाउँथिन् र घाँस भएतिर पगा लगाउँथिन्। साँझ फेरि पानी र खोलेफाडो गरी फर्किन्थिन्। सम्झना ब , ला , त्कृ , त भएपछि हजुरबुवा गोरखको होस-हवास उडेको छ। श , व भेटिएको बेला उनी बे , हो , स भए। श , व कसले उठायो, कता लग्यो केही थाहा पाएनन्। शुक्रबार बल्ल सम्हालिएर उनी जाहेरी लेखाउन वकिलकहाँ पुगेका छन्। ‘हामी आफन्तसहित जाहेरी लेखाउन वकिलकोमा आएका छौं, आज जा , हे , री दिन्छौं,’ काका ईश्वरले भने।
Prevभारतसँगको सीमा क्षेत्र अनुगमनका लागि गृहमन्त्री दार्चुलामा
Nextअर्काको श्रीमतीसंग रं’गेहात फेला परेका पुरुषले पाँचौं तलाबाट हा’म ‘फा’लेपछि….…